Vatamiinada quruxiyo jirka iyo cuntooyinka laga helo Arimaha Bulshada | Somali music, lyrics, songs, mp3 Warwad
Vatamiinada quruxiyo jirka iyo cuntooyinka laga helo
Waxa ay khubarada caafimaadku sheegayaan in ay jiraan dhowr nooc oo ka mid ah fiitamiinnada oo awood u leh in uu jirka uu la dagaallamo gabowga, kuwaas oo muddada ugu dheer ee suurtogalka ah maqaarka ku ilaalinaya dhalinyaronimada. Maqaarku awood buuxda uma laha in uu samayst fiitamiinnada uu u baahan yahay, sidaa awgeed waxa uu mar kasta gacan ka sugaa cuntada oo uu ka raadsado fiitamiinnadaa.
Fiitamiin E:Fiitamiin E waxa uu maqaarka ka ilaaliyo dhibaatada ka iman karta fallaadhaha qorraxda, wasakhowga cimilada iyo maaddooyinka kale ee burburin kara unugyada maqaarka. Fiitamiin E waxtarkiisu waxa uu sii bataa marka uu la falgalo fiitamiin C ga. Cuntooyinka laga helana waxaa ka mid ah, Qamandiga, Cananaaska, Maangaha, Saliid saytuunta iyo Fuul Suudaaniga.